Xubno katirsan Aqalka Sare oo ka walaacsan heshiikii magaalada Nairobi ee Soomaaliya iyo Kenya – Kalfadhi
Qaar kamid ah Senatarada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay heshiiskii shalay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ku gaareyn Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya kadib khilaafkii ka dhashay Sahmintii Shidaalka Badda ee Soomaaliya.
Xubnahaan katirsan Aqalka Sare ayaa sheegay in ay jiraan qodobo ama su’aalo badan oo shaki ku abuuri kara kuwaas oo u baahan in ay ka jawaabto Madaxtooyada Soomaaliya si ay u shaki baxaan shacabka Soomaaliya. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo katirsan Aqalka Sare ayaa sheegay in su’aalo badan uu qabo ay shaki geliyeen, su’aalahaasi waxay ka dhasheen Safarada Madaxweynaha Soomaaliya ee Itoobiya iyo Kenya iyo kulankii kale ee ka horeeyay kaas oo dhaxmaray hogaamiyaasha Itoobiya, Kenya iyo Eritrea.
“Kiis iska waalkii Kenya ee arinta Badda u ekaa mid qorshayaal badan laga leeyahay” ayuu yiri Sentor Xuseen Sheekh Maxamuud. “
Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu ka shakiyay arimo badan oo shirka ka soo dhax-muuqday waxa uuna dalbaday in dowladda Soomaaliya ay ka hadasho si aan dalka loo gelin qiyaano Qaran sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha waxa uu dhahay, Waxaan ka heshiiney in xiriirka diblomaasiyadda dib loo soo celiyo, arinta Badda lagama wadahadlin, Waxaan ka shakiyey qosolka Uhuru iyo waji qafilnaanta Farmaajo, Waxaan ka shakiyey in Dacwaddii Badda ee ICJ laga noqonayo, Waxaan ka shakiyey in dalka dembi iyo khiyaano laga galeyo”, ayuu yiri Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Senator Ilyaas Cali Xasan oo katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale arintaan ka hadlay. Qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in ay jirto xaalad cabsi ah balse ay aakhirka banaanka imaan doonto.
“Madaxda iyo Shacabka Soomaaliyeed aadbey ufaham-sanyihiin khilaafka jira in uusan aheyn mid ku yimid arimaha lagu sheegey War-fasaxaafadeedka Villa Somalia soo qortey, War Jiraase Banaankuu Imaan Insha Allah”, ayuu yiri Ilyaas Cali Xasan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxtooyada Soomaaliya wali kama jawaabin eedeymaha loo jeedinayo iyo walaaca ay qabaan Shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan shirkii ku soo dhamaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay arintaan baari doonaan islamarkaana ay kula xisaabtami doonaan Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan hore Surcad “Gole-yaasha deegaanka waa muhiim inay hogaamiyaan dadka bulshada qiimaha weyn ugu fadhiya”